आज प्रेम दिवस ! यी ३ राशि हुनेहरुलाई मिल्नेछ चोखो प्रेम र न्यानो साथ ! - Naya Pusta
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७५ फाल्गुन २, बिहीबार १४:५१
काठमाडौँ । हरेक वर्ष भ्यालेन्टाइन डे १४ फेब्रुअरीमा मनाइन्छ । यो त्यो दिन हो जुन दिन प्रेम गर्ने जोडीहरुले आफ्नो प्रेम व्यक्त गर्छन् । साथै लामो समयसम्म एक-अर्काको साथ निभाउने बाचा कसम खान्छनन् ।
वृष राशि : यस वर्षको भ्यालेन्टाइन डे वृष राशि हुनेहरुको लागि धेरै विशेष रहनेछ। प्रेमीसँग रमाइलो क्षण बि ताउने मौका मिल्न सक्ला।
प्रेमीलाई आफ्नो व्यक्तित्व सजिलै कायल पार्न पनि तपाई सफल हुनुहुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा रहेका सम्पूर्ण तिक्तता देखि पनि छुटकारा मिल्नेछ। साथै प्रेमीबाट नसोचेको उपहार समेत मिल्ने देखिन्छ। लामो समय देखि मन पराइएको व्याक्ति बाट प्रेम प्रस्ताव आउने छ। साथै मनले चाहेको व्यक्तिबाट विवाहको प्रस्ताव पनि आउन सक्ला।
धनु राशि : धनु राशि हुनेहरुको भ्यालेन्टाइन डे प्रेममय हुनेछ। लामो समय देखि प्रेमीसँग रहेको मतभेदको विषयमा खुलेरै कुरा गर्नुभएमा उचित समाधान निस्किने छ। धार्मिक यात्राको सम्भा वना पनि देखिन्छ।
साथै यस दिन तपाईलाई वस्त्र, गहना लगायतका विलासिताका सामानहरु उपहारको रुपमा प्राप्त हनेछ। कसैले प्रेम प्रस्ताव राख्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पनि यस वर्षको भ्यालेन्टाइनस सुखद सावित हुनेछ। प्रेम व्यक्त गर्न कुनै संकोच नराख्नु होला।
मकर राशि : काम विशेषले बाहिर रहेका आफ्नो प्रेमीबाट उपहार प्राप्त हुन सक्ला। भावनात्मक रुपमा प्रेमीसँग मेल हुनेछ। प्रेममा रहेका बाधा बारे चर्चा समेत हुनेछ भने भविष्यको बारे पनि प्रेमीसँग तपाईको छलफल हुने देखिन्छ। शुक्रको कारण यस दिन प्रेम प्रस्ताव राख्नको लागि अपरान्ह शुभ हुन सक्ला।
प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन